A T M ကတျ ထဲက ငှထေုတျဖို့ ခကျနသေူတှေ အတှကျ လှယျကူအဆငျပွေ နိုငျတဲ့ နညျးလမျး တဈခု – Shwe Likes
တချို့ဆို ATM ကတ်ထဲက ငွေထုတ်ဖို့ကို မနက် ၆ နာရီလောက်ထဲကထပြီး သွားတန်းစီရတယ် …. လူတွေ အရမ်းများတော့ တနေကုန်နီးပါး တန်းစီ …. နေ့ခင်း ၃ လေးနာရီလောက်မှ တရက်စာအတွက် ထုတ်ပေးတဲ့ ၃ သိန်းလေးပဲရတာ ….ဒါတောင် တခါတလေ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်လို့ ATM စက်ရှေ့ရောက်ပြီဆိုမှ ပိုက်ဆံ ကုန်သွားပြီဆို ပင်ပန်းလွန်းခဲ့သမျှ သေပါလေရောပဲ ….
အဲ့လို လုပ်မဲ့အစား AYA Pay အကောင့်တခု ဖွင့်လိုက်ပြီး AYA Pay Agent ( သို့ ) Max ဆီဆိုင် ကနေပဲ ငွေထုတ်ခ Fees နဲနဲလောက်ပေးပြီး ထုတ်လိုက်ကြပါ …… တနေကုန် အိပ်ရေးပျက်အပင်ပန်းခံ တန်းစီနေမဲ့အစား ပိုက်ဆံ ၃ သိန်းကို ထုတ်ခ 2500 လောက်ပေးလိုက်ရတာကပဲ ပိုအဆင်ပြေကြမှာပါ ….( ခုချိန်မှာတော့ agent တွေလဲ ငွေထုတ်ပေးဖို့ အဆင်မပြေလောက်တော့ ကျွန်တော်ကတော့ Max ဆီဆိုင်ကနေပဲ သွားထုတ်ခဲ့တယ် …)
တနေ့ကို ၃ သိန်း ထုတ်ပေးပါတယ် …… ( AYA Pay Acc က Level2ဖြစ်ရပါမယ် )
1…. အရင်ဆုံး Play store ကနေပြီး AYA Pay App ကို download ဆွဲပါ ….
2…. ပြီးရင် Acc ဖွင့်လိုက်ပါ ..Acc ဖွင့်တာ လွယ်လွယ်လေးပါ .. Ph no ၁ ခုပဲ လိုတာပါ…( အကောင့်နာမည်ကို မှတ်ပုံတင်ထဲက နာမည်အတိုင်း ထားပါဗျ … acc name Eng လို ရေးပါ ) ဖုန်းထဲကို ပြန်ချပေးတဲ့ Otp
3 လုံးကို ဖြည့်ပေးပီးရင်AYA Pay အကောင့်အတွက် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ password6လုံးထားပါ … ဒါဆိုရင် AYA pay အကောင့်တခုရပါပီ ..( ဒီအကောင့်က Level 1 ပဲ ရှိပါသေးတယ်…. )
4…. AYA Pay အကောင့်ကို AYA mobile banking နဲ့ ချိတ်ဆက်ပီး ငွေဖြည့်နိုင်ရန် AYA pay acc ကို Level2ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ )ဒီမှာ Level2ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းကို AYA Pay ရဲ့ page ကနေပဲ ပုံနှင့်တကွ သေချာပြထားတဲ့ Link ထည့်ပေးထားပါတယ် ……. 👇👇👇
5…. Level2ဖြစ်အောင်လိုအပ်တာတွေ အကုန်ဖြည့်ပီးသွားလို့ Pending ဖြစ်နေပြီဆိုရင် AYA Pay ရဲ့ Call center ph. …01 4705777 ext 1 ကို ခေါ်ပီး Level2လျှောက်ထားတကြောင်း Approved ချပေးဖို့လှမ်းပြောပါ …( ဖုန်းဆက်မပြောလဲ အချက်လက်မှန်ကန်ရင် ၂၄ နာရီအတွင်း Approved ပေးပါတယ် )
6 …. AYA mobile banking နဲ့ချိတ်ပီး Aya pay ထဲကို ငွေဖြည့်ပါ …(AYA pay ထဲကို 10 သိန်းထိပဲ ဖြည့်လို့ရပါတယ် )
7 …နီးစပ်ရာ Max ဆီဆိုင်သွားပြီး AYA Pay ထဲကနေ ငွေထုတ်ချင်လို့ပါပြောပြီး ထုတ်ရုံပဲ….( Max ဆီဆိုင်တိုင်းတော့ မရသေးပါဘူး ..ရနိုင်တဲ့ Max ဆီဆိုင်တွေကို AYA pay call center ကို ဖုန်းဆက်မေးလို့ရပါတယ် …..) ကျနော်ကတော့ ရွှေပြည်သာ သာဓုကန်နားက Max ဆီဆိုင်နေ သွားထုတ်နေကြပါ …လူ အရမ်းမများပါဘူးသွားတိုင်း ၃ လေး ယောက်ပဲ ရှိပါတယ် ….
8… တခါထုတ်ရင် တရက်ကို ၃ သိန်း ထုတ်ပေးပါတယ် …(3သိန်းကို ထုတ်ခ 2500 ပေးရပါတယ် ) ……တယောက်ထဲ AYA Pay ဖွင့်ပီးသား ဖုန်း ၂ လုံး ၃ လုံး ယူသွားပြီး အကြိမ်ကြိမ်ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ ကိုယ့်နောက်မှာ တန်းစီစောင့်နေသူ အများကြီး ရှိနေရင် နားလည်မှုရှိပြီး ကိုယ်ချင်းစာပေးကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်….အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ ….
လူငယ်တွေလဲ နီးစပ်ရာ လူကြီးတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီလုပ်ပေးလိုက်ကြနော် ….တကယ်လို့ Aya pay Acc ဖွင့်တာရော Level2တင်တာရော မလုပ်တတ်ဘူးဆို Max ဆီဆိုင်မှာလဲ သူတို့ လုပ်ပေးပါတယ်နော် …( ဟိုနေ့က သက်ကြီးပိုင်းတွေပါ Atm ထုတ်ဖို့ နေပူထဲ တန်းစီနေကြရတာမြင်တော့ စိတ်မကောင်းလို့ပါ … 😔 ) မသိတာရှိရင် AYA Pay ရဲ့ Page တွေ ဖုန်းနံပါတ်တွေကနေလဲ သွားမေးကြပါလို့ …